Oovimba be-ETC/USD-Funda ukurhweba
tag: I-ETC / i-USD
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum Classic (ETC): I-Etc iyatshintsha kuLuhlu oluQinisekileyo, Abasweleyo abathengi kwiNqanaba eliPhezulu
I-ETC iyatshintsha kuluhlu oluqinileyo phakathi kwe- $ 10 kunye ne- $ 12.50
I-altcoin ijongene nokuchasana kwinqanaba leedola ezili-14
I-Ethereum Classic (ETC) yezibalo zangoku
Ixabiso langoku: $ 12.43
Intengo yeNtengiso: $ 2,618,808,479
Umthamo wokuThengisa: $ 1,304,360,093
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 18, $ 19, $ 20
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 11, $ 10, $ 9
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum Classic (ETC) ngo-Matshi 15, 2021
I-Ethereum Classic ibikuloo mnyhadala ubophelelweyo ukusukela ngoFebruwari 23. I-altcoin iye yaguquguquka phakathi kwe- $ 10 kunye ne- $ 12.50. Ngomhla we-13 ku-Matshi, i-ETC ibuyise ngaphezulu kwe- $ 12 yenkxaso kwaye yahlanganisana ukuya kwi- $ 14 ephezulu. Abathengi abanakukwazi ukugcina amandla akhulayo njengoko iibhere zityhale ixabiso libuyele kumda oboshwe kuluhlu. Namhlanje, iinkunzi zeenkomo ziye zabuya kwakhona ukuze ziphinde ziqhubeke kwakhona.
ETC / USD- Itshathi yemihla ngemihla
I-Ethereum Classic (ETC) iZalathi zoBuchule zokuFunda
Ixabiso le-crypto liphule ngaphezu komgca wokumelana nomjelo ohla. Intsingiselo yeyokuba i-crypto kungenzeka inyuke ngaphezulu. Isalathiso samandla esihlobo sikwinqanaba lama-53. Ibonisa ukuba ixabiso linendawo eyoneleyo yokuhlangana phezulu.
I-ETC / i-USD-Itshathi yemihla ngemihla
I-Ethereum Classic iya kuphinda inyukele phezulu ukuba ukunganyangeki kwinqanaba leedola ezili-14 kwaphuliwe. Ngo-Matshi 13 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Oku kubuyiselwa endaweni kuthetha ukuba i-ETC iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye ephezulu yeedola ezili-18. 68.
tags ETC, I-ETC / i-USD, I-ETHEREUM YAKUDALA, Uhlalutyo lwamaxabiso